एक दिनमै ९ सय १९ जना पुरुषसँग सेक्स ! – Akhabar Dainik
एक दिनमै ९ सय १९ जना पुरुषसँग सेक्स !
सोमवार, अशोज २४, २०७३
गिनिज बुकमा नाम लेखाउनका लागि मानिसहरु जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । आखिर सयौँ मनिससँग एकै ओछ्यानमा सहवास गर्नै किन नपरोस् मानिसहरु किर्तिमान कायम गर्ने भनेपछि तम्तयार हुँदा रहेछन् । एकजना महिलाले एउटा यस्तै रेकर्ड बनाइन् जुन अहिलेसम्म कसैले पनि तोड्ने हिम्मत गरेको छैन ।
पोल्याण्डमा हरेक वर्ष एउटा प्रतियोगिताको आयोजना गरिन्छ । जसमा कैयन् महिलाहरु विश्व रेकर्ड कायम गर्ने चाहनाले सामेल हुन्छन् । यस्तैमा एक महिलाले एकै दिनमा ९ सय १९ जना पुरुषसँग यौन सम्पर्क कायम गरी विश्व रेकर्ड बनाइन् ।
२४ घण्टामै झण्डै हजार जनासँग सेक्स गर्न सक्ने ती किर्तिमानी महिला हुन् अमेरिकी पोर्नस्टार लिजा स्पार्क । दिनमै ९ सय १९ पुरुषसँग सेक्स गर्नु चानचुने होइन । यसका लागि उनले हरेक पुरुषसँग केवल ४५ सेकेण्ड मात्र बिताइन् । उनको त्यो तिव्रगतिको सम्भोग क्षमता देख्दा उपस्थित मानिसहरुले पनि विश्वास गर्न सकेनन् ।
स्मरण रहोस् यसअघि यो रेकर्ड अर्कै महिलाको नाममा थियो । जसले पहिलोपटक ७५९ जना पुरुषसँग सेक्स गरेकी थिइन् । तर लिजाले उक्त रेकर्ड तोड्दै ९१९ जना पुरुषसँग सेक्स गरिन् ।
लिजाले सन् २००४ को अक्टोबर १६ मा यो रेकर्ड बनाएकी हुन् । १२ वर्ष भैसक्दा पनि उनको यो रेकर्ड कसैले तोड्ने हिम्मत गरेको छैन ।
मुगु जिल्लाको तीनै सिट एमालेलाई ,चुनावी तालमेल नमान्ने माओवादीको निर्णय
मुगु । नेकपा माओवादी केन्द्र मुगु जिल्ला कमिटीले एमालेसँग......